ISTICMAALKA SIFOOYINKA DAAWEYNTA EE SAFKA EE DAAWADA DHAQAMEED - RAASHINKA DADWEYNAHA
Xayawaanka Willow ayaa muddo dheer la ogaaday sifooyinka bogsashada. Waxaa si weyn loo isticmaalo kaliya ee beerta daawada dhaqameed, laakiin sidoo kale loogu talagalay soo saaridda daroogo badan, saliidaha, tinctures.
Qodobkani, waxaan tixgelineynaa sida caarada cagaaran ay bogsiinayso sifooyinka iyo ka hortagga isticmaalka.
Waxyaabaha kiimikada ee kalluunka bawdada
Barkad Willow leeyahay guryaha qiimaha leh qiimo leh sababtoo ah ka kooban kiimikada hodan ku ah nafaqooyinka:
Intaa waxaa dheer, jilifku wuxuu ka kooban yahay macdano lagama maarmaan u ah jidhka bini'aadamka:
Bogsiinta sifooyinka safka
Qodobka faa'iidada leh ee caga-beebka lama tirtiri karo. Waxaa ka mid ah: ka hortagga; hemostatic; anti-bararka; astringent; bogsashada dhaawaca; choleretic; hurdada; hagaajinaysaa dheefshiidka; wuxuu kor u qaadaa balaarinta xididdada dhiigga; duritaan; bakteeriyada; antifungal; diraya dirxiga; waxay yareysaa daalka iyo madax xanuunka; dhimi dhidid; joojiyaa shubanka.
Daaweynta jilicsan ee jilicsan waxtar u leh xanuunka foosha, caabuqyada cirridka iyo cunaha, cudurada habdhiska kaadi-mareenka, caabuqa xubinta taranka dumarka, xanuunada shaqada ee caloosha, xiidmaha. Waxay leedahay hanti aad u kacsan, waxay ka caawisaa in laga takhaluso madax-xanuun, xanuunka dheeraadka ah, cilladda caadada, xanuunka leh laabotooyinka iyo gout. Dhibaatooyinka ka yimaadda jeermiska ayaa kaa caawin doona yareynta kulaylka, qandhada, cudurrada bararka. Diyaargarowga ka soo baxa firfircooni waxay si firfircoon u joojisaa dhiigbaxa, hayso guryaha bakteeriyada.
Cannabis Willow ayaa sidoo kale si firfircoon loo isticmaalaa ujeedooyinka qurxinta - daaweynta qashin-qubka, timo luminta, tirtiridda burooyinka, madaxa madow, dhididka, iyo cudurrada maqaarka.
Ma taqaanaa? Awowayaasheen ayaa ku dhajiyay xayawaanka biinboorka leh sifooyinka qadiimiga ah. Waxaa loo isticmaali jiray in lagu dhiso qadar jacayl. Intaa waxaa dheer, waa hab wax ku ool ah oo looga hortagayo jinniyo sharaf iyo xaasidnimo.
Cunnooyinka daawada dhaqameed: daaweynta cudurrada
Caleemaha Willow waa mid aad u caan ah marka loo isticmaalo daawada dhaqameed. Sababtoo ah sifooyinka bogsashada ee caashadda, shaaha, decoctions, tinctures, boomaatada iyo cadaadiska ayaa laga sameeyey. Marka la daaweynayo cudurrada halista ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in daaweynta dadku aysan siin natiijooyin degdeg ah. Sidaa daraadeed, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo sidii looga hortagi lahaa xasilinta ama dib-u-dhiska daaweynta cudurrada daba dheeraatay. Sababtoo ah kaliya isticmaalka nidaamyada muddada-dheer ee daaweynta dadka ayaa u oggolaan doona soo kabashada. Ambalaaska, ma aha kuwo ku habboon.
Waa muhiim! Inta daaweyntu socoto, suurtogal maaha in la isku daro isticmaalka jilif gacmeed iyo aspirin, antibiyootiko, qufac iyo daaweyn qabow, jimicsi, vitamin C.
Isla mar ahaantaana, diyaargarowga dadweynaha ee ku saleysan caga-beebka ayaa si dhakhso ah u tirtiri doona cudurrada noocaas ah sida:
xanuunka yar yar ee xanuunka;
Hoos waxaa ku xusan in aan tixgelinno cuntooyinka ugu wax ku oolsan ee cudurada ugu caansan.
Iyada oo daal jidheed
Ka saar dufanka jirka si fiican u caawiya jilicsanaanta qashinka. Si aad u diyaargarowdid, waxaad u baahan tahay inaad ku shubato laba qaado oo jilicsan caashinka la jarjiro 450 ml oo biyo kulul ah oo ka bax 15 daqiiqo biyo dhar. Iska daa inaad qaboojiso ka dib markaad jilciso. Si aad ugu isticmaashid qaaddo (qolka qadada) 5 daqiiqo ka hor cuntada ka hor saddex jeer maalintii.
Sidoo kale daaweyn wanaagsan ayaa noqon lahaa decoction of 30 g caleemaha bjørk iyo 60 g of jilif cows. Isku dar waxaa lagu shubaa galaas biyo kulul ah oo la kariyey iyo ilaa laba saacadood. Cab 1/3 koob oo 60 daqiiqo cuntada ka dib.
Ma taqaanaa? Raaxeysiga ka dib shaqada adag waxay ka caawineysaa in la neefsado qoyaan jilicsan.
Si loo yareeyo daalka ka dib culeysyo dheer ama culus, waxaad isticmaali kartaa lugta qubeyska. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo 5 qaado oo ah walxo ceeriin ah oo biyo ah (litir), karkari ilaa nus saac ka badan kulaylka yar. Kadibna isku dar ah ayaa la miiray, oo la dheereeyey litir biyo ah.
Haddii aad ka xanuunsan tahay madax xanuun, ku shub qaado shaaha oo ah barkad budada ah oo ku jirta galaas biyo kulul ah. Ku dabool daboolka daboolka ama dabool kuna bixi 10 daqiiqo. Next, qabow heerkulka qolka iyo cabitaanka waqti ka hor cunista. Wixii madax xanuun joogto ah, waxay waxtar u leedahay qaadashada maraqan: qaado oo ku dul shub biyo kulul la kariyey (dhalo) kuna adkeyso laba saacadood heerkul ah 20-22 digrii. Iska ilaali isku dar ah, cab cabitaan ah maraq ah shan jeer maalintii kahor cuntooyinka. Kooraska daaweynta waa bil.
Waa muhiim! Ha ku shubin biyo ceeriin ah biyo karkaraya, haddii kale qolofku wuxuu lumayaa dhamaan sifooyinka wanaagsan.
Nadiifinta dhuunta adoo adeegsanaya decoction waxay kaa caawineysaa in laga takhaluso laryngitis: ku shub 450 ml oo biyo ah (qaado qaado) oo jilicsan, isku kari ilaa 20 daqiiqadood dab aad u hooseeya, ka daadi isku dar, dareeraha ugu horeyso biyo la kariyey. Gargle subaxdii iyo habeenkii.
Iyada oo shuban (shuban)
Si aad uga takhalusto shubanka, ku shub 450 ml oo biyo ah oo qiyaas ah oo jilicsan oo karkari 20 daqiiqo Ka dibna adkee isku dar ah, keen dareeraha qadarka hore ee biyaha la kariyey. Cab cabi saddex jeer maalintii kahor cuntooyinka.
Waxaad u isticmaali kartaa turjumaan: ku dhaji laba qaado oo jilicsan oo biyo kulul leh (400 ml) oo kari kari ilaa 20 daqiiqadood dab aad u hooseeya. Ka tag saacad si aad u faafiso. Cadaadis, cab cabitaan ah saddex qaado maalintii maalintii kahor cuntada. Kooraska daaweynta waa bil. Si looga takhaluso turjubaanka, laabotooyinka iyo arthritis waxay ku caawinaysaa tincture of kortex. Si arrintan loo sameeyo, 50 g oo ah walxo ceeriin ah waa in la burburiyo dawo budo ah oo ku shub hal litir oo ah 40% aalkolo ama vodka. Kadibna isku dhafka waa in lagu adkeeyo meel mugdi ah 14 maalmood. Waxaa lagu talinayaa in la ruxo weelka maalin kasta. Dhamaadka faleebo, isku dar ah ayaa la soo gooyaa. Tincture waxaa la qaataa laba jeer maalintii koob loogu talagalay.
Iyada oo caadada culus
Si loo yareeyo lumitaanka dhiigga muddada caadada ah iyo xanuunka ka takhaluso, waxaa lagula talinayaa in aad cabto decoction ee jilif. Diyaargarowgeeda, 350 ml oo biyo ah ayaa lagu shubay miisaan yar oo jilicsan, simmered 20 daqiiqo. Iska ilaali isku dar ah, keen dareeraha mugga bilawgii biyaha la karkariyey. Cab qabad saddex jeer maalintii.
Iyadoo cudurrada maqaarka iyo cagaha dhididka
Haddii ay dhacdo maqaarka maqaarka, sameyska boogaha ama nabarrada meelaha ay dhibaatadu saameysey, waxaa lagula talinayaa in lagu daboolo jilif, lagu burburiyo budo.
Si aad uga takhalusto cagaha dhididka, waxaa lagu talinayaa in la diyaariyo qalabkaas oo kale: ku shub 350 ml oo biyo ah oo leh qiyaas jilicsan oo isku kari ilaa 15 daqiiqadood. Cadaadiska, ku dar halkii litir oo biyo ah. In maraq keena ku qabo lugaha 10 daqiiqo.
Ma taqaanaa? Waxaa jira caddayn ah in wakhtiyadii hore, si ay uga takhalusaan cirridka xun ee cagaha, waxay ku riday sharabaad habeenkii, kaas oo budada kabuubta barkiis lagu rusheeyey.
Iyada oo dhiigbaxayo iyo dhicin
Si loo joojiyo dhiig-baxka caloosha, waxaa lagu talinayaa in lagu daadsho 250 ml oo biyo ah oo leh miisaan, oo isku kari ilaa 20 daqiiqadood. Maraq qaadashada qaado 3-4 jeer maalintii kahor cuntada.
Si loo joojiyo dhiigbaxa dibedda, waxaa lagula talinayaa inuu ku rusheeyo boogta leh budada jilicsan. Habkani wuxuu sidoo kale waxtar u yahay daaweynta boogaha. Marka cirridka sanka ka soo baxaan jilif caag ah ayaa lagula talinayaa in lagu lifaaqo sanka la taaban karo.
Si looga saaro burooyinka
Mid ka mid ah habka ugu wax ku oolka ah ee looga hortago burooyinka waa salicylic acid. In qaabka dabiiciga ah, waxaa kaliya laga heli karaa laga bilaabo decoction jilif beed. Qaadada saxanka diiran ku shub 250 ml oo biyo ah iyo isku kari ilaa 15 daqiiqadood. Qabow, ka dibna ku dabool suufka suufka ah ama gabal yar oo faashad lagu qooyey maraq si meesha ay saameysay.
Si aad uga takhalustid finanku waxay ku caawinayaan budada jilicsan, oo laga buuxiyey khal. Suurada soo baxda waxaa lagu dabaqaa burooyinka oo ah qaabka cadaadiska 15 daqiiqo.
Si aad u soo dejiso kuleylka, waxaad isticmaali kartaa qaacidada soo socota: ku shub walxo cayriin leh galaas biyo kulul ah, ka tag 15 daqiiqo biyo qabow, qabow, cadaadis. Cab cabi saddex jeer maalintii kahor cuntooyinka.
Waa muhiim! Caleenta maraqyada looma isticmaali karo antibiotics, paracetamol, aspirin. Haddii xummaddu sarayso, waxaa fiican in aad qaadato daroogada, halka aad ka joogsato isticmaalka decoction.
Sida loo codsado kondomka guriga
Caleenta caanaha ah waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo timaha. Marka ay dhacaan, waxaad u baahan tahay inaad madaxaaga maydho laba jeer toddobaadkii oo leh dib u milicsi jilicsan iyo cufan. Si aad u diyaariso maraq, qaado qaado maaddooyinka, ku shub 450 ml oo biyo ah kuna hayso qubeys biyo ah 20 daqiiqo. Ka dib marka dareeruhu ku buufiyo qiyaastii laba saacadood iyo filter.
Decoctions bark ayaa sidoo kale si wax ku ool ah uga caawisa in laga takhaluso gardarrada, kor u qaadida timaha. Laba qaado oo jilif ah waxay u baahan yihiin inay ku shubaan 400 ml biyo kulul la kariyey, inay ku adkaystaan ​​20 daqiiqadood. Timaha raaci dareeraha ka dib marka aad dhaqaysid.
In formation of boogaha, nabaro, waxaa lagula talinayaa in ay ku rusheeyeen aagga ay saameeyeen leh budada jilicsan. Si aad u nadiifiso dhukayga iyo si tartiib ah u jilciso maqaarka haragga, waxaad isticmaali kartaa maaskaro: ku shub 150 ml oo biyo ah oo leh qaado oo ah budo jilicsan oo tirtir maqaarka.
Iyada oo ay ku xiran tahay hantideeda faa'iido leh, soo bixinta caleemaha caleemaha waxaa badanaa loo isticmaalaa wax soo saarka shaambada, xajka, maaskarada timaha, kiriimyada saa'id ah.
Ma taqaanaa? Wadamada Carabta, decoctions waxaa loo isticmaalaa dib u soo kabashada maqaarka.
Uruurinta iyo kaydinta qalabka daaweynta jirka
Jilbiska Willow waa la goostay guga hore. Kala soocida jilifku waa inuu ahaado kaliya laamaha la gooyey. Ka dibna alaabta ceeriin ah ayaa la qalajiyey meel qorrax leh, meel fiican oo hawo leh, ama foorno ama qalajiye. Waa in maskaxda lagu hayaa in heerkulka uusan aheyn in ka badan 50 ° C. Curls ee qalabka ceeriin waa in aanad isu geyn, haddii kale cagaarku si qaldan u qalaji doono, fangaska ayaa ku dari kara.
Marka qalloocsan yahay, jilifku waa inuu jabo si fudud, ma guga. Dhinaceeda ayaa leh midab wasakh ah ama midab cagaaran, midabkuna waa inuu noqdaa mid sahlan, maqaar fudud oo leh jilicsan. Jilifta habboon ee la goostay waxay leedahay dhadhan qadhaadh.
Alaabta ceymiska waa in lagu keydiyaa sanduuqyada kartoonada ama sanduuqyada alwaaxda, bacaha dhogorta ee qalalan, mugdi ah, meel fiican oo hawo leh, heerkul ah 18-22 digrii. Bisha hal mar, waa in la furo hawo si loogu daboolo loona hubiyo jiritaanka baalalka iyo cayayaanka kale. Kaabashka go'ay wuxuu ku habboon yahay isticmaalka afar sano gudahood laga bilaabo xilliga goosashada.
Waa muhiim! Guryaha ugu faa'iido badan ee jilif laga bilaabo laamihii sanadka labaad iyo saddexaad ee koritaanka.
Khudbadaha isticmaalka mukhaadaraadka safka
Lacagta laga bilaabo galmada lama isticmaali karo carruurta ka yar 16 sano, iyo sidoo kale uurka iyo nuujinta. Intaa waxaa dheer, barkada cagaaran ayaa ka hortageysa isticmaalka jiritaanka cudurada qaarkood, kuwaas oo ah:
Xaaladaha dareen-celinta xasaasiyadeed (caloolxumo, maqaarka maqaarka, finan, xummad), waxaa lagama maarmaan ah in la joojiyo isticmaalka alaabta caanaha ah.
Hadda waxaad ogtahay cayayaanka qoyan ee wanaagsan. Cunnooyinka ku saleysan waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed ilaa waqtiyadii hore waxayna xaqiijiyeen waxtarkooda wax ka badan hal mar. Isla markaa, ka hor intaan la isticmaalin alaabooyinka, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in aanay jirin wax ka horjeeda isticmaalka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Raashinka dadweynaha 2019